Ubuntu, fantaro ny zava-drehetra momba ity rafitra fiasa maimaimpoana miorina amin'ny Linux | Ubunlog (Pejy 5)
Firefox 79 dia manomana fiasa hanondranana tenimiafina voatahiry ... ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy zavatra milay
Firefox 79 dia manomana fiasa iray ahafahantsika manondrana ny fahazoan-dàlanay mankany amin'ny fisie CSV, saingy tokony hanao izany tsara izy ireo raha tsy izany dia hampidi-doza.
Firefox dia manana rafitra zanatany amin'ny fametrahana webapps mitovy amin'ny Chrome. Azavainay ny fomba hampiasana sy hampiasana azy
Firefox dia manana asa miafina hatramin'ny v73 izay mamela antsika hametraka fampiharana toa an'i Chrome. Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hampiasana azy io isika izao.
Ny kinova vaovao an'ny mpitety ny anarana momba ny Tor 9.5 dia eto
Taorian'ny fampandrosoana enim-bolana dia nambara ny famoahana kinova vaovao "Tor Browser 9.5", izay nananganana ny ...
Ny Firefox 77 dia mijanona amin'ny fanaterana noho ny bug DNS. Firefox 77.0.1 dia misy ankehitriny manamboatra ny olana
Mozilla dia namoaka ny Firefox 77.0.1 hanamboarana a amin'ny DNS. Najanona ny fanoloran'ny orinasa v77.0 noho ny fahalemena voalaza etsy ambony.
Minder, mamorona, mamolavola ary asehoy sary an-tsaina ny hevitrao ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Minder isika. Miaraka amin'ity programa ity, ny mpampiasa dia afaka mamorona, mamolavola ary maka sary an-tsaina ny hevitsika.
Firefox 77 dia manitatra ny fanohanan'ny WebRender amin'ny Windows ary manatsara ny fitantanana ny fanamarinana, ankoatra ireo fiasa vaovao hafa
Mozilla dia nandefa ny Firefox 77, kinova vaovao lehibe sy marin-toerana ao amin'ny tranokala misy azy miaraka amin'ny vaovao toy ny fialana amin'ny fanohanana ny FTP.
Foliate 2.2.0, fanavaozana iray hafa ho an'ity mpamaky ny eBook ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny sasany amin'ireo endri-javatra sy ny fametrahana azo atao ny mpamaky ebook Foliate 2.2.0.
Linux Mint 20 dia hanatsara ny fiarovanao amin'ny Snaps, zavatra nitarainan'ny vondrom-piarahamonina
Tao anaty naoty fohy momba ny fampandrosoana Linux Mint 20, Clement Lefebvre dia manome toky fa hanatsara ny fanohanany ireo fonosana Snap izy.
Linux 5.7 dia miaraka amin'ny fanovana isan-karazany izay misy fanatsarana ny fahombiazana
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7, ny kinova farany farany an'ny voam-bary novolavolainy izay misy fanatsarana kely amin'ny zava-drehetra, eny fa na ny fampisehoana aza.
Android Studio 4.0, safidy fametrahana hafa ao amin'ny Ubuntu 20.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery fomba hafa hametrahana Android Studio 4.0 amin'ny Ubuntu 20.04 haingana sy mora isika.
Plex Media Server, apetraho amin'ny Ubuntu 20.04 ity mpizara media ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka Plex Media Server amin'ny Ubuntu 20.04 amin'ny alàlan'ny fonosana .deb na ny fitoerany.
Ny GNOME 3.38 dia halefa miaraka amina mpandefa rindrambaiko nohavaozina izay tsy hampiditra tab "Matetika".
Ireo mpamorona GNOME dia miasa amin'ny mpandefa fampiharana vaovao izay ho tonga ao amin'ny GNOME 3.38 miaraka amin'ny fanovana ny endriny.
10 zava-misy mahaliana momba ny Ubuntu izay tokony ho fantatrao
Ubuntu dia rafitra fiasa, saingy be dia be ny manodidina azy. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia miresaka momba ny zava-misy 10 momba ny tontolo iainany izay tokony ho fantatrao.
Knowte, fampiharana fandraisana an-tsoratra kanto ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Knowte isika. Izy io dia rindrambaiko kanto sy haingana handraisana naoty avy amin'ny Ubuntu.
Transmission 3.0, kinova vaovao amin'ity client torrent tsotra ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Transmission 3.0 isika. Ity no kinova farany navoakan'ity mpanjifa torrent tsotra sy malaza ity.
Linux 5.7-rc7 dia normal be, noho izany dia efa eritreretina ilay kinova miorina sy Linux 5.8
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7-rc7, kinova izay niverina tamin'ny ara-dalàna ary mahatonga antsika hieritreritra ny kinova azo antoka amin'ity alahady ity.
Beekeeper Studio, apetraho ity SQL tonian-dahatsoratra sy mpitantana data ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ao amin'ny Beekeeper Studio isika. Tonian-dahatsoratra SQL tsotra sy mahery nefa mpitantana angona angona izy.
Ny KDE dia mitantara amintsika ny vaovao voalohany an'ny Plasma 5.20 sy ny fifindra-monina mankany GitLab
Nate Graham avy amin'ny KDE dia nilaza taminay momba ny fiasa vaovao maro ho avy, toy ny voalohany ho an'ny Plasma 5.20 sy ny fifindra-monina mankany GitLab.
HetsikaWatch, araho amin'ny Gnu / Linux ny fotoan'ny efijeryo
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny ActivityWatch isika. Ity programa ity dia hanampy antsika hanara-maso ny fotoantsika eo alohan'ny efijery.
Ubuntu 20.10 dia manomana fanatsarana hafa ho an'ny ZFS: TRIM dia navadika ho default
Amin'ny fanatsarana vaovao ho avy amin'ny volana Oktobra, Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla dia hamela ny TRIM ho an'ny kapila mafy tohana amin'ny alàlan'ny default.
Alacarte, manova, mamorona na mamafa ireo hitsin-dàlana ao amin'ny menio fampiharana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Alacarte isika. Ity dia programa hanovana, hamoronana na hamafana ny hitsin-dàlana amin'ny rindranasa.
Canonical dia mamoaka kinova vaovao an'ny kernel Ubuntu hanamboarana lesoka fiarovana isan-karazany, tsy misy matotra
Canonical dia nanavao ny kernel Ubuntu hanamboarana lesoka fiarovana maro, saingy tsy misy amin'izy ireo no lohalaharana.
Ny WSL an'i Microsoft dia hamela anay hitantana amin'ny fomba ofisialy ny fampiharana Linux miaraka amin'ny GUI amin'ny Windows 10
Nampanantena i Microsoft fa tsy ho ela isika dia hampiasa ny rindranasa GUI Linux amin'ny Windows 10 amin'ny alàlan'ny WSL. Ho mendrika ve izany?
Pigz, atsaharo ny fotoana fohy avy eo amin'ny terminal
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery pigz isika. Ity dia compressor izay fampiharana gzip multithreaded haingana sy mahomby.
Linux 5.7-rc6 tonga lehibe noho ny tokony ho izy, ka mety hisy rc8
Linus Torvalds dia namoaka Linux 5.7-rc6, lehibe kokoa noho ny tianao. Raha tsy miova ny fironana, dia hisy ny Kandida famotsorana fahavalo
Pip, fametrahana ary fototr'ity fitaovana ity ao amin'ny Ubuntu 20.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka Pip ao amin'ny Ubuntu 20.04 sy ireo foto-kevitra fototra hampiasana azy ao amin'ny rafitra.
Kdenlive 20.04.1 dia misy manamboatra bug 36 ary manatsara ny kinova ho an'ny Windows sy AppImage
Kdenlive 20.04.1 dia tonga nanamboatra ireo bibikely voalohany amin'ilay kinova izay navoaka tamin'ny aprily 2020 ary nanampy endri-javatra tamin'ny kinova Windows.
Vaovao voalohany amin'ny Plasma 5.19 beta sy ny fanatsarana hafa tonga ao amin'ny KDE
Ny KDE dia nanome antsika fiasa vaovao maro izay ho tonga amin'ny biraonao atsy ho atsy, ao anatin'izany ny maro amin'ny Plasma 5.19.0, amin'ny beta amin'izao fotoana izao.
Webmin, apetraho amin'ny Ubuntu 20.04 ity fitaovana ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka Webmin amin'ny Ubuntu 20.04. Fitaovana fitantanana rafitra io.
Fampiharana KDE 20.04.1 Azo alaina izao hanombohana ny fanamboarana ny app April Bugs
Ny KDE Community dia namoaka ny KDE Applications 20.04.1, ny fanavaozana ny fikojakojana voalohany amin'ity andiany ity, eto fotsiny hahazoana ny fikitika vitsivitsy voalohany.
Ao amin'ny Google Chrome dia efa manomboka manakana karazana doka sasany izy ireo
Vao tsy ela akory izay ny mpamorona Google dia namoaka fanambarana izay nanambarany ny fanombohan'ny fanakanana ny karazana doka isan-karazany ...
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mahazo ny teny miafin'ny tambajotra Wi-Fi izay nampifandraisintsika teo aloha.
Linux 5.7-rc5 Tonga taorian'ny herinandro be atao indrindra, saingy tsy dia be loatra
Linux 5.7-rc5 dia tonga miaraka amin'ny habe somary lehibe kokoa noho ny antonony, saingy zavatra antenaina izany noho ny haben'ny RC teo aloha.
Vaovao? tsiro: Ubuntu Unity Remix 20.04 dia mamoaka ny kinova miorina voalohany
Misy Ubuntu Unity Remix 20.04 izao, ilay kinova miorina voalohany amin'ity tsiro vaovao ity izay mampiasa ny tontolon'ny sary nafoin'i Canonical.
Elisa sy ireo fampiharana KDE hafa dia hanohana ny fanohanan'ny audiobook sy ireo fiasa vaovao hafa tsy ho ela
Elisa sy ireo rindranasa KDE hafa dia afaka milalao audiobooks manomboka amin'ity fahavaratra ity, miaraka amin'ireo fiasa vaovao hafa izay ho avy tsy ho ela amin'ny KDE.
Ubuntu 20.04 dia efa voamarina ho an'ny Raspberry Pi. Inona no niova?
Canonical dia efa nanamarina ny Ubuntu 20.04 hampiasaina amin'ny ankamaroan'ny tabilao Raspberry Pi. Azavainay ny dikan'izany.
Ubuntu 20.10 dia hahafahantsika miditra amin'ny dian-tànana
Ao amin'ny iray amin'ireo fanovana voalohany fantatra amin'ny Ubuntu 20.10, Groovy Gorilla dia hamela antsika hiditra amin'ny dian-tànana.
Draw.io Desktop, apetraho amin'ny Ubuntu io mpanamboatra kisary io
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ao amin'ny Desk.io Desktop isika. Ity dia mpamorona kisarisary tena ilaina misy .deb, AppImage ary Flatpak
Git, apetraho amin'ny Ubuntu 20.04 ity rafitra fanaraha-maso kinova ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka sy manatanteraka fikirakira fototra ny Git ao amin'ny Ubuntu 20.04
Tsy dia betsaka ny voalaza momba an'io: Tapitra ve ny KDE tao amin'ny KMail-ny? Kubuntu 20.04 dia mifindra any Thunderbird
Nanapa-kevitra ny hanaisotra ny KMail amin'ny rindrambaiko Kubuntu 20.04 default i KDE ary nampiditra an'i Thunderbird. Inona no ao ambadik'ity hetsika ity?
UbuntuDDE 20.04, ny kinova miorina voalohany amin'ny tsiro Ubuntu ho avy miaraka amin'ny tontolo Deepin
Misy UbuntuDDE 20.04 izao, ny kinova miorina voalohany amin'ny hoe inona ny tsiro Ubuntu fahafolo ary mampiasa Deepin toy ny tontolon'ny sary.
Plasma 5.18.5, ny famoahana fikojakojana farany indrindra amin'ny andiany dia tonga mba hamatotra ny famitana ny tontolo iainana
Ny KDE dia namoaka ny Plasma 5.18.5, ny famoahana fikojakojana farany indrindra amin'ity andiany ity izay manamboatra ny bibikely farany mba hahatonga ny zavatra rehetra ho lavorary.
Firefox 76 dia misy ankehitriny miaraka amin'ny fanatsarana ny Lockwise, ny PIP ary ny WebRender nitarina
Firefox 76 dia tonga manitatra ny fanohanan'ny WebRender, manatsara ny mpitantana ny tenimiafinao ary miaraka amin'ireo zava-baovao miavaka hafa.
Mandehana, apetraho amin'ny Ubuntu 20.04 ity fiteny fandefasana ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka ny fiteny fandaharana Go amin'ny Ubuntu 20.04 amin'ny fomba tsotra.
Elementary OS 5.1.4 tonga miaraka amin'ny fanatsarana, fanavaozana ary maro hafa
Andro vitsy lasa izay dia natolotra ny fandefasana ny kinova vaovao an'ny Elementary OS 5.1.4, izay fizarana iray izay napetraka ho mpisolo toerana.
Linux 5.7-rc4: ary ny fitoniana dia mitohy aorian'ny kandidà famotsorana efatra
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7-rc4 ary mbola milamina tanteraka ny zava-drehetra. Raha izao no mitohy dia ho tonga amin'ity volana ity ny kinova miorina.
LAMP, apetraho Apache, MariaDB ary PHP amin'ny Ubuntu 20.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fomba ahafahantsika mametraka LAMP ao amin'ny Ubuntu 20.04, na inona no mitovy; Apache, MariaDB ary PHP.
Visual Studio Code, apetraho ao amin'ny Ubuntu 20.04 ity mpamoaka loharano misokatra ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka Visual Studio Code amin'ny Ubuntu 20.04 avy amin'ny snap na avy amin'ny repo an'i Microsoft.
Ny KDE dia manomana fanatsarana ny Dolphin sy ny fanamboarana maro hafa
Ny fanamarihan'i Nate Graham isan-kerinandro momba izay tonga amin'ny KDE dia nilaza taminay momba ny fanatsarana ny Dolphin sy ireo fanovana kely hafa.
Ny Linux Mint Mint-Y Theme dia hanolotra loko marevaka kokoa ao Ulyana
Ao amin'ny naoty isam-bolana amin'ny vaovao ao amin'ny Linux Mint, nandroso i Clement Lefebvre fa hanana loko mamiratra kokoa i Ulyana.
NodeJS sy npm, fametrahana ao amin'ny Ubuntu 20.04 | 18.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fomba ahafahantsika mametraka NodeJS sy npm amin'ny Ubuntu 20.04 sy 18.04 avy amin'ny NodeSource na snap.
GNOME 3.37.1 dia azo alaina ho dingana voalohany mankany amin'ny tontolo Groovy Gorilla
Tonga ny GNOME 3.37.1 ho ny dingana voalohany mankany amin'ny GNOME 3.38, ny tontolon'ny sary izay hampiasaina ny Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla, miaraka amin'ny vaovao tsy dia lehibe.
Ahoana ny fomba fampidinana horonan-tsary na audio APA avy amin'ny YouTube raha tsy mametraka rindrambaiko fanampiny
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fampidinana horonan-tsary na horonantsary avy amin'ny YouTube, ary izany rehetra izany nefa tsy mametraka rindrambaiko fanampiny.
Groovy Gorilla dia efa nampakatra ny Daily Builds voalohany, saingy tsiro roa fotsiny
Efa misy tsiro Ubuntu roa izay nampakatra ny Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla Daily Build voalohany. Tsy ho ela, ny sisa amin'ireo kinova.
Mpizara tranonkala Apache, fametrahana amin'ny Ubuntu 20.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fomba ahafahantsika mametraka mpizara tranonkala Apache amin'ny Ubuntu 20.04 sy ny baiko fototra vitsivitsy hampiasana.
Hanavao ny kernel Ubuntu anao, ao amin'ny Focal Fossa koa miandry ny tatitra momba ny fiarovana anao
Canonical dia namoaka kinova vaovao an'ny kernel Ubuntu ho an'ny kinova tohana rehetra, amin'ity indray mitoraka ity ao anatin'izany ny Focal Fossa.
SubMix Audio Editor, editor audio multitrack maimaim-poana ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Submix Audio Editor izahay. Tonian-dahatsoratra multitrack maimaim-poana ity amin'ny fanaovana zavatra fototra.
Ahoana ny fomba ahafahana manohana an'i Flatpak amin'ny Ubuntu 20.04
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny rafitra nohavaozina hampiasa fonosana Flatpak ao amin'ny Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa miaraka amin'ny fivarotana lozisialy vaovao.
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla dia manomboka ny hazakazaka fampandrosoana
Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla dia nanomboka ny fivoarany, izay midika fa nanomboka nifanakalo hevitra ny fanovana an'ity kinova ity.
Ho an'ny be herim-po: ny fomba hanafahana ny Ubuntu 20.04 amin'ny famoretan'ny Snaps
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny fomba fanesorana tanteraka ny fonosana Canonical Snap ao amin'ny Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa anao.
Linux 5.7-rc3: lasa adala ny fampandrosoana mandreraka eo amin'ny tontolo iray
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7-rc3, Kandidà famotsorana fahatelo amin'ny andiany iray izay mivoatra am-pitoniana ary manimba ny mpamorona azy mihitsy aza.
Ubuntu dia hanatsara ny fidirana amin'ny rantsantanana. Ho hitantsika amin'ny gorila ve izany?
Miasa i Ubuntu ahafahantsika miditra amin'ny alàlan'ny dian-tanana, fa ho vonona amin'ny volana oktobra ho avy ve ity vaovao ity?
Opera 68, kinova vaovao miaraka amin'ny fanohanana ny Instagram
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Opera 68 isika. Amin'ity kinova farany an'ity tranonkala ity dia hahita fanohanana ny Instagram isika.
Ny KDE dia hanohy hanatsara ny Elisa dia hanaraka amin'ny volana aogositra ary ho avy tsy ho ela ny fanovana hafa
Nandroso i KDE fa ny mpilalao default an'i Kubuntu, Elisa, dia hanohy hivoatra amin'ity fahavaratra ity, ankoatra ireo fiasa vaovao hafa izay havoaka tsy ho ela.
Maninona ianao no tokony hiverina amin'ny lozisialy GNOME ary manadino momba ny lozisialy Ubuntu avy amin'ny Ubuntu 20.04 ... farafaharatsiny izao
Ny rindrambaiko GNOME dia nesorina tamin'ny Ubuntu 20.04, fa tsara kokoa ny mamerina azy io ary mamerina ny fampiasa rehetra. Lazainay aminao ny fomba.
Groovy Gorilla: Ubuntu 20.10 dia manambara ny kaody sy ny daty famoahana azy
Gorila Groovy. Izay no anarana kaody an'ny Ubuntu 20.10, ny kinova manaraka amin'ny rafitra Canonical izay ho tonga amin'ity volana Oktobra ity.
JClic, fonosana fanabeazana azo alaina amin'ny Flatpak
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery JClic isika. Tontolo iainana hamoronana sy hitarika hetsika multimedia fanabeazana ity.
Kdenlive 20.04 dia manolotra safidy vaovao amin'ny fanitsiana, fametahana marika ary sary boot vaovao
Kdenlive 20.04 dia tonga toy ny andiany voalohany amin'ity andiany ity miaraka amina endrika vaovao mahaliana toy ny fanatsarana ireo fitaovana fanovana.
Zavatra tokony hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 20.04 LTS
Aorian'ny fametrahana Ubuntu 20.04 LTS, miankina amin'ny karazana fametrahana nofidinao, dia mila mametraka ...
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 20.04 LTS miaraka amin'ny Windows?
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia nizara fomba roa aho hametrahana ny kinova Ubuntu 20.04 LTS vaovao amin'ny solosaintsika, ity ...
Azo alaina izao ny Ubuntu Studio 20.04, miaraka amin'ny tontolon'ny sary mitovy amin'ny Xubuntu 20.04 sy ireo vaovao ireo
Taorian'ny fotoana nisian'ny tsy fahazoana antoka dia efa manana kinova Ubuntu Studio vaovao isika: Tonga i Ubuntu Studio 20.04 LTS Focal Fossa miaraka amin'ity vaovao ity.
Ubuntu Cinnamon 20.04 dia tonga manao devoara hanehoana ny firotsahany hofidina ho lasa tsiro ofisialy
Ubuntu Cinnamon 20.04 no kinova voalohany amin'ity fizarana ity tonga amin'ny daty marina. Ahitana ireo vaovao rehetra ireo.
Xubuntu 20.04 dia misy ankehitriny, miaraka amina lohahevitra maizina vaovao, Xfce 4.14 sy ireo fiasa vaovao hafa
Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dia azo alaina amina fisintomana, fametrahana na fanavaozana izao. Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao daholo ny momba ny fanombohana.
Lubuntu 20.04 LTS Focal Fossa misy ankehitriny, miaraka amin'ny LXQt 0.14.1 sy ireo fiasa vaovao hafa
Lubuntu 20.04 dia tonga ho ny kinova LTS farany teo miaraka amin'ny vaovao miavaka toa ireo izay hazavainay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Guide
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity dia mizara torolàlana fametrahana fohy izahay, izay natao hanohanana ireo vao teraka izay mbola manana fisalasalana eo am-panaovana izany.
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 20.04 avy amin'ny kinova Ubuntu teo aloha?
Izahay dia hizara dingana vitsivitsy izay ahafahantsika manavao avy amin'ny kinova Ubuntu taloha (izay misy fanohanana) mankany amin'ity kinova vaovao ity ...
Ny KDE Applications 20.04 dia misy fiasa vaovao maro ao Elisa, Dolphin, Kdenlive ary ny sisa amin'ny apps
KDE Applications 20.04 dia misy izao, fanavaozana lehibe izay misy fiasa vaovao ao amin'ny Elisa, Dolphin ary ny sisa amin'ireo fampiharana an'ny tetikasa.
Ubuntu Lumina, distro vaovao ho avy amin'ireo izay mampanantena ny hamerina amin'ny laoniny ny fitaovana taloha na ho haingana be amin'ny maoderina indrindra
Ubuntu Lumina dia tetikasa vaovao iray izay manambatra ny tombotsoan'ny Ubuntu miaraka amin'ny tontolo misy sary natao ho haingana, hazavana ary fiasa.
BleachBit 4.0.0, kinova vaovao amin'ity programa fanadiovana ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery BleachBit 4.0.0 isika. Ity dia programa fanadiovana sy fikojakojana ny rafitra Ubuntu.
OpenVPN 2.4.9 kinova madinidinika izay manamboatra bug
Andro vitsy lasa izay dia navoaka ny kinova vaovao an'ny OpenVPN 2.4.9, ity dia kinova fanitsiana izay navoaka niaraka tamin'ny ...
Sharutils, mamorona arisiva mamoaka tena miaraka amin'ny shar ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Sharutils isika. Ity vondron'asa ity dia ahafahantsika mamorona rakitra misintona tena miaraka amin'i shar.
Linux 5.7-rc2 tonga mamela mamela ny antontan-taratasy microcode AMD CPU lehibe kokoa
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7-rc2 ary anisan'ireo fanovana nataonay dia ahafahana mandray ireo rakitra microcode AMD CPU lehibe kokoa.
Ahoana ny fametrahana UNetbootin amin'ny Ubuntu 20.04 ary hatramin'ny Ubuntu 18.04
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fametrahana UNetbootin ao amin'ny Ubuntu 18.04 amin'ny alàlan'ny tahiry ary ao amin'ny Ubuntu 20.04 avy amin'ny binary.
Slim PDF Reader, mpijery PDF maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Slim PDF Reader isika. Izy io dia mpijery PDF maimaim-poana azontsika ampiasaina amin'ny Ubuntu.
Ny KDE dia manatsara hatrany ny systray sy ny sary masina applet sasany
Nate Graham, avy amin'ny Community Community Community Community, dia miresaka momba ny fiasa vaovao izay omanin'izy ireo ho an'ny birao novolavolainy, ary tsy vitsy izy ireo.
Ubuntu 20.04 dia hanamarika a mialoha sy aorian'ny tantaran'ny fonosana Snap
Ubuntu 20.04 dia hisolo ny lozisialy Ubuntu amin'ny Snap Store. Inona no dikan'ity? Rehefa tapitra ny fisafotofotoana dia vaovao vaovao ity.
Lisitry ny rindrambaiko faktiora sy kaonty tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba rindrambaiko samihafa azonay ampiasaina amin'ny Ubuntu izahay hanatanterahana ny faktiora sy ny kaontin'ny orinasanay.
Sncli, ampiasao ny SimpleNote avy amin'ny terminal Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery sncli isika. Ity fampiharana ity dia hahafahantsika mampiasa SimpleNote avy amin'ny terminal Ubuntu.
Productivity Timer, fampiharana fitantanana fotoana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Productivity Timer isika. Ity dia fampiharana hitantanana ny fotoanantsika eo alohan'ny efijery.
Megacubo, mpilalao IPTV hijerena fahitalavitra avy any Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Megacubo isika. Izy io dia mpilalao IPTV hijerena fahitalavitra avy any Ubuntu
Linux 5.7-rc1 misy izao: ny ara-dalàna rehetra na eo aza ny Paska sy COVID-19
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.7-rc1, Kandidà famotsorana voalohany vaovao tonga am-pitoniana tanteraka, na eo aza ny zava-drehetra iainanay.
Hugo, mpanorina tranokala miovaova haingana sy malefaka
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Hugo isika. Izy io dia mpamorona tranokala statika haingana, malefaka ary maimaimpoana tanteraka.
Ny KDE dia hamela anao handamina ny hafainganam-pandeha na ny "scroll" ary ny vaovao ho avy hafa
KDE dia namoaka lahatsoratra vaovao tao amin'ny bilaoginy izay ilazany amintsika ny vaovao ho avy, toy ny hoe azo ahodina ny hafainganam-pandeha.
Sokafy ny mpamokatra DVD, mamoaka sary DVD anao manokana ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny and. Ity programa ity dia hanampy antsika hamokatra sary DVD.
Ny Plasma 5.18.4 dia nanemotra ny fahatongavany tao amin'ny repository Backports avy amin'i Kubuntu 20.04 Focal Fossa
Manantena ny hahatongavan'ny Plasma 5.18.4 amin'ny zavatra hitanao ve ianao? Tsy irery ianao. Ny fahatongavany dia nampihemotra an'i Kubuntu 20.04 Focal Fossa.
Foliate 2.0, kinova vaovao amin'ity mpamaky ebook ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Foliate 2.0 isika. Ity no kinova farany tamin'ity mpamaky ebook ity izay mitondra fanovana maro.
Firefox 75 dia tonga miaraka amin'ny bara adiresy vaovao ary manatsara ny fifanarahana HTTPS
Mozilla dia nanangana ny Firefox 75, ny kinova farany lehibe an'ny mpitety tranonkala izay tonga miaraka amin'ny bara adiresy nohatsaraina miaraka amin'ireo zava-baovao.
Canonical dia manavao ny kernel Ubuntu hanamboarana fahalemena marobe, vitsy amin'ity indray mitoraka ity
Canonical dia nanavao indray ny kernel an'ny rafitra fiasa novolavolainy, Ubuntu. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nametraka bibikely vitsivitsy.
Stellarium 0.20, havaozina ho an'ity planetarium maimaim-poana ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fanavaozana farany ity planetary maimaim-poana antsoina hoe Stellarium 0.20 ity isika.
Mampanantena ny hanatsara kokoa ny zava-bitan'ny sasany amin'ireo rindrambaiko i KDE
Nampanantena i KDE fa hanatsara ny fahombiazan'ny rindrambaiko sasantsasany izay handika haingana kokoa rehefa manao asa sasany.
Navoaka tampoka ny Firefox 74.0.1 hamahana ireo marefo roa izay hararaotina
Mozilla dia namoaka ny Firefox 74.0.1, fanavaozana ny fikojakojana izay tonga mba hamahana ireo lesoka fiarovana roa izay nohararaotina.
Sourcetrail, mpikaroka kaody cross-platform malalaka
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Sourcetrail isika. Ity dia mpikaroka kaody izay ahitana ny kisary fiankinan-doha amin'ny fifandraisana.
Ubuntu 20.04 sy ireo tsiro ofisialy rehetra misy azy dia misy amin'ny beta voalohany
Efa nanomboka ny fanisana: Canonical dia namoaka Ubuntu 20.04 Beta, miaraka amin'ireo tsiro ofisialy rehetra ao aminy, ao anatin'izany ny Kubuntu sy Xubuntu.
Ubuntu Cinnamon 20.04 dia mialoha ny sisa amin'ny tsiro ary mandefa ny beta voalohany
Ubuntu Cinnamon 20.04 Beta dia misy ankehitriny, mialoha ny tsiro ofisialy hafa. Izy io dia miaraka amin'ny Linux 5.4 sy ny kinova Desktop farany an'ny Cinnamon.
CudaText, mpamoaka kaody loharano maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery CudaText isika. Izy io dia mpamoaka kaody maimaimpoana ho an'ny Ubuntu misy safidy vitsivitsy.
MystiQ, mpanova haino aman-jery mora ampiasaina ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny MystiQ Video Converter isika. Mora be ny mampiasa mpanova feo sy horonan-tsary ao Ubuntu.
Linux Mint 20, antsoina hoe Ulyana, hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 ary hita amin'ny 64-bit ihany
Efa fantatsika izay hiantsoana ny Linux Mint 20: ny codename-ny dia Ulyana ary hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Plasma 5.18.4, ny famoahana fikojakojana farany ny andiany izay misy izao
Ny vondrom-piarahamonina KDE dia namoaka ny Plasma 5.18.4, ny famoahana fikolokoloana fahefatra sy farany ny tontolon'ny sary hampiasain'i Kubuntu 20.04 Focal Fossa.
Ny tsy fitovizan'ny fampiantranoana amin'ny Linux sy ny iray amin'ny Windows
Miaraka amin'ny fampiantranoana Internet na fampiantranoana Internet dia afaka mamonjy atiny sasany amin'ny Internet isika. Fa ny iray amin'ny Linux tsara kokoa sa ny iray amin'ny Windows? Azavainay aminao izany.
Ny kernel Ubuntu dia nohavaozina mba hamahana olana tokana, saingy ny laharam-pahamehana
Ny kernel ho an'ny famoahana Ubuntu roa farany dia nohavaozina mba hamahana ny fahalemena tokana, saingy laharam-pahamehana izany.
Eclipse 2020-03, amboary kaody Java amin'ny Ubuntu 18.04 miaraka amin'ity IDE ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Eclipse 2020-03 isika. IDE mahafinaritra ity izay ahafahantsika mamorona kaody Java.
Linux 5.6: efa azo ampiasaina izao ny kinova azo antoka amin'ity famoahana lehibe ity… tsy hahatratra ny Focal Fossa izy. Ireo no vaovao tena mampiavaka azy
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.6, ny kinova farany farany an'ny voamadinika novolavolainy izay tonga tamin'ny vaovao mahaliana maro.
Ny KDE dia mampanantena tafio-drivotra mampiavaka ny lozisialy novolavolainy
Ao amin'ny fanamarihana amin'ity herinandro ity, nampanantena ny KDE fa hampiditra fisehoan-javatra vaovao marobe amin'ny rindrambaiko novolavolainy izy ireo. Lazain'izy ireo amintsika koa ny momba ny fanovana hafa
Fampandehanana, ampidino ary ampiasao sary an-tsaina manana kalitao avy amin'ny Unsplash
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Fondo isika. Fampiharana hikarohana sy hisintomana ireo sary mivoaka avy amin'ny Unsplash.
Misy ny divay 5.5 izao, manatsara ny fanohanan'ny UCRTBase C ary manamboatra bug mihoatra ny 30
Ny divay 5.5 izao dia misy hanatsarana ny fanohanan'ny tranomboky sasany ary hanitsiana bibikely maro mifandraika amin'ny rindrambaiko manokana.
Electerm, mpanjifa terminal misy manager manager, ssh ary sftp
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Electerm isika. Izy io dia mpanjifa terminal izay manolotra mpitantana rakitra, ssh ary sftp.
Corona -jam, araho ny antontan'isa COVID-19 avy amin'ny terminal
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Corona-barotra isika. Ity dia fitaovana ahafahantsika manaraka ny statistika amin'ny COVID-19.
Plasma Bigscreen: KDE dia manolotra rafitra fiasa natao ho an'ny fahitalavitra
KDE dia nanolotra ny Plasma Bigscreen, rafitra fandefasana na mpandefa natao hampiasaina amin'ny fahitalavitra mifanaraka amin'ny Raspberry Pi.
OpenMeetings, manaova fihaonambe amin'ny Internet amin'ny Ubuntu 18.04
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery OpenMeetings isika. Izy io dia mpizara iray hametrahana kaonferansa amin'ny Internet.
PodScript, ampidino avy eo amin'ny terminal ireo podcast tianao.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Podopio isika. Ity dia programa ho an'ny terminal izay ahafahantsika misintona ireo podcast malalantsika.
Linux 5.6-rc7, misy ny RC farany amin'ny famoahana lehibe izay mangina tokoa ny fivoarany
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.6-rc7, ny Kandidà famotsorana farany an'ity kinova ity nantsoina ho manan-danja indrindra amin'ny tantaran'ny kernel.
Ny KDE dia tsy mijanona ary manohy manomana vaovao maro, na eo aza ny fahavoazan'ny COVID-19
Mandeha hatrany ny fiaraha-miasan'ny Community Community KDE na eo aza ny krizy COVID-19. Tsy mijanona ny masininao ary efa manomana fanovana ho an'ny rindrambaiko ho avy ianao.
NoMachine, fitaovana birao lavitra azo alaina ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery NoMachine isika. Fitaovana iray ahafahana miditra amin'ny birao lavitra eo an-toerana na amin'ny Internet.
Canonical dia afaka miasa any an-trano ary ny famoahana ny Ubuntu 20.04 dia tsy tokony ho voan'ny Coronavirus
Nanasaraka ny tenany i Canonical ary hanao ny asany lavitra ireo mpiasa ao aminy, ka tsy ho voan'ny Covid-20.04 ny famoahana Ubuntu 19.
Vaovao ao amin'ny Focal Fossa: Ubuntu 20.04 dia mampiseho ny sary famantarana ny solosainanao amin'ny fanombohana
Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dia nanova ny efijery booty ary mampiseho ny sary famantarana ny solo-sainanao ankehitriny rehefa mi-boot.
Ity no rindrambaiko tsara indrindra amin'ny tantaran'ny Ubuntu, raha ny filazan'ny vondrom-piarahamonina Twitter
Taorian'ny fanadihadiana marobe dia nanolotra izay rindrambaiko tsara indrindra tamin'ny tantarany i Ubuntu. Ho hitanao eto izany.
Alacritty, emulator terminal haingana sy tsotra miaraka amin'ny fampisehoana tsara
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Alacritty isika. Izy io dia emulator terminal izay mifantoka amin'ny fahatsorana sy haingana.
Heimer, rindranasa tsotra hamoronana sari-saina avy amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Heimer isika. Ity dia rindrambaiko tsotra ahafahantsika mamorona sarintany saina.
Mankalaza ny amboara eran-tany amin'ny sary sokitra i Ubuntu. Mandray anjara amin'ny fifidianana ny famaranana!
Ubuntu dia mitazona «cup eran-tany» hahitana hoe inona ny sary an-tsary tsara indrindra amin'ny tantarany. Iza no handresy?
Webots, rindrambaiko loharano misokatra hanahafana ireo robot finday
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery Webots isika. Ity dia programa hanamboarana robot 3D finday ho an'ny tanjona fanabeazana.
Nanavao ny kernel Ubuntu indray ny Canonical hanamboarana lesoka fiarovana vitsivitsy
Canonical dia nanavao indray ny kernel Ubuntu hanamboarana kilema fiarovana vitsivitsy. Ampirisihina hanavao faran'izay haingana.
Geary 3.36 tonga miaraka amina interface vaovao nohavaozina, Emoji sy maro hafa
Ny fanombohana ny kinova vaovao an'ny mpanjifa mailaka "Geary 3.36" dia nambara tato ho ato, izay misy fanovana mahaliana ...
Freeplane, mamorona sarintany saina sy fitantanana fahalalana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Freeplane isika. Amin'ity programa ity dia afaka mamorona sarintany saina sy fitantanana fahalalana isika.
Linux 5.6-rc6 dia mamerina ny zava-drehetra ho ara-dalàna ao anatin'ny roa herinandro aorian'ny famoahana tsy miovaova
Miverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra tamin'ny famoahana ny Linux 5.6-rc6, herinandro monja taty aoriana rehefa tsy nampoizina ny raharaha.
Frameworks 5.68.0 dia misy fanovana efa ho 200 hanalefaka ny rindrambaiko KDE rehetra
Ny KDE dia namoaka ny Frameworks 5.68.0, ny kinova farany amin'ireo tranomboky ireo izay manatsara ny zava-drehetra mifandraika amin'ny KDE avy ao anatiny.
Ny KDE dia te-hifantoka amin'ny fanatsarana ny systray izao, sy ireo fanovana hafa miasa
Ny KDE dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny systray eo amin'ny tontolon'ny sary. Izy koa dia miasa amin'ny fanovana bebe kokoa izay lazainay eto.
ikona, rindranasa KDE vaovao hamoronana sary famantarana fampiharana
ikona dia "Fampiharana KDE" vaovao izay hanampy ny mpamorona hamorona sary masina mifanaraka amin'ny scenario rehetra.
Ho faty ny Ubuntu Studio ... raha tsy mahazo ny fanohanan'ny fiarahamonina izy
Raha ny indray mandeha dia toa mety hanjavona i Ubuntu Studio. Mangataka ny fanohanan'ny fiarahamonina mba handroso ny mpamorona azy.
Bladecoder Adventure Engine, motera 2D hamoronana sary an-tsary
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Bladecoder Adventure Engine isika. Izy io dia motera 2D hamoronana traikefa an-tsary.
Te hanandrana ny kinova Flatpak an'ny Firefox ve ianao? Azavainay ny fomba hitsapana ny beta voalohany anao
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba fametrahana Firefox 75 amin'ny kinova Flatpak, izay beta indrindra amin'ny kinova fitenenana amin'ny browser.
Pngquant, fampiasana zotram-baiko handefasana sary PNG
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Pngquant isika. Fitaovana mibaiko ny baiko handefasana sary PNG.
GNOME 3.36, ankehitriny dia misy ny kinova misy ny tontolon'ny sary izay hampiasain'i Ubuntu 20.04 Focal Fossa
GNOME 3.36 dia misy izao, ny tontolon'ny sary izay hampiditra ny kinova Ubuntu manaraka izay havoaka amin'ny volana aprily.
Tonga ny Plasma 5.18.3 hanamboatra bibikely ary hanao tsara kokoa an'ity famotsorana ity
Plasma 5.18.3 dia efa tonga amin'ny famoahana fikojakojana fahatelo amin'ity andiany ity mba hahatonga ny tontolon'ny sary KDE ho tsara kokoa.
Kitendry hitsin-dàlana ho an'ny Gnome, fototra vitsivitsy hiasa haingana kokoa
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ireo hitsin-dàlana fitendry vitsivitsy ho an'ny Gnome isika izay hahafahantsika miasa haingana kokoa amin'ity birao ity.
Firefox 74 izao no misy, miaraka amina endri-javatra vaovao tsy dia malaza firy ary tsy misy fitoeram-kaonty marobe
Navoakan'i Mozilla ny Firefox 74, ny kinova vaovao an'ny mpitety tranony izay misy fisehoan-javatra vaovao misongadina, fa ny Container Multi-Account dia tsy iray amin'izany.
Linux 5.6-rc5: milamina ny zava-drehetra, saingy io no rc5 lehibe indrindra hatramin'izay
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.6-rc5, ny Kandidà famoahana fahadimy amin'ity kinova ity izay lazainy fa lehibe indrindra amin'ny tantarany.
Avereno ny birao amin'ny toerana misy anao amin'ny dconf
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba fanonanan'ny mpampiasa ny birao amin'ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny dconf
Ny GNOME 3.36 dia ho avy amin'ny herinandro ambony, ary ny RC farany navoakany dia nanisy ireo fanovana farany ireo
GNOME 3.36 dia ho tonga ao anatin'ny herinandro monja, saingy ny mpanamboatra azy dia nanisy fanovana minitra farany amin'ny RC 2 amin'ny kinova manaraka amin'ny tontolon'ny sary.
KDE Applications 19.12.3 tonga mba hanao ny fikitika farany amin'ity andiany ity
Ny KDE Community dia namoaka ny KDE Applications 19.12.3, ny famoahana fikolokoloana fahatelo sy farany amin'ity andiany ity izay tonga manamboatra bug.
Topi-maso 0.1.2, fanavaozana an'ity solon'ny GIMP ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Glimpse 0.1.2 isika. Kibon'ny Gimp malaza izy io, ary tsy mitovy amin'ny anarany fotsiny.
Chrome OS 80 dia miaraka amin'ny fanatsarana amin'ny fampiharana Linux, Ambient EQ, Netflix ary maro hafa
Rehefa avy nihemotra andro maromaro dia navotsotra ihany ny kinova Chrome OS 80, satria nokasaina hatao ny 11 feb ...
Azonao atao izao ny misintona ny wallpaper Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, ary jereo ny endriny amin'ny tsiro hafa
Na dia tsy nanambara izany tamin'ny haino aman-jery ofisialy aza ny Canonical, dia azonao atao izao ny misintona ny wallpaper Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Kodi 18.6 tonga miaraka amina fanamboarana manomboka amin'ny audio ka hatramin'ny mpampiasa interface
Kodi 18.6 Leia dia eto ho kinova farany fikojakojana an'ity andiany ity ary tonga hanitsy ny lesoka amin'ireo faritra rehetra ao aminy.
gImageReader, fampiharana PDF afaka OCR
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery gImageReader isika. Ity dia fampiharana PDF afaka mampiasa OCR azonay ampiasaina amin'ny Ubuntu.
Fanandramana Linux Mint miaraka amin'ny mavokely ary mandefa fampiharana hizara rakitra eo anelanelan'ny Linux
Linux Mint dia nilaza taminay ny momba ny drafitra ho avy, ao anatin'izany misy palette miloko vaovao izay ahatongavan'ny mavokely.
Linux 5.6-rc4 tonga miaraka amin'ny habe lehibe kokoa, fa ny fihenana dia andrasana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy
Linux Torvalds dia namoaka Linux 5.6-rc4, kinova izay nahazo lanja kely, saingy antenaina hanomboka hidina tsy ho ela.
Ny KDE dia manomboka mifantoka amin'ny Plasma 5.19 ary efa manomana ireo fanovana rehetra ireo
Nate Graham avy amin'ny KDE dia nandefa lahatsoratra fohy momba ny zavatra iasan'izy ireo izay amantarana fa efa mifantoka amin'ny Plasma 5.19 izy ireo.
Xubuntu 20.04 koa dia manokatra ny fifaninanana sary an-tsoroka ho an'ny Focal Fossa
Xubuntu 20.04 dia nanokatra ny fifaninanana valiha. Ireo mpandresy enina dia ho tafiditra ao amin'ny rafitra fandefasana izay hivoaka amin'ny volana aprily.
Ahoana ny fomba hanaingoanao ny rakitrao amin'ny LibreOffice?
Androany dia tsy olana ho an'ny olom-bitsy fotsiny ny fiainana manokana sy ny fitahirizana ny vaovao azo antoka. Nanomboka androany dia olona be fikasana tsy mendrika ...
Ubuntu Budgie 20.10 dia efa omanina ary ny mpandrindra azy dia manome antsika fotoana hitaomana ny fivoarany
Ny mpamorona ny tsiro Ubuntu Budgie dia manasa antsika hitaona ny fivoaran'ny kinova manaraka, Ubuntu Budgie 20.10.
Tsy ofisialy izy io, fa ny Ubuntu 20.04 kosa dia efa nanambara izay ho valin-kasainy
Na dia mbola tsy tamin'ny fomba ofisialy aza dia nanambara i Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa izay ho sary mivalona hampiasainy manomboka amin'ny volana aprily ho avy.
Opera R2020 tonga miaraka amin'ny fanovana isan-karazany ary manatsara ny fizahana tranonkala
Ireo mpamorona ny tranokala malaza amin'ny Opera, dia nanambara andro vitsivitsy lasa izay ny famoahana kinova vaovao amin'ny tranokalan'izy ireo ...
Miavaka, fampiharana Markdown mora ampiasaina ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fampiharana Markdown iray hafa antsoina hoe Notable isika. Izy io dia fampiharana izay hahafaly ny mpampiasa.
Hanampy teknolojia fiarovana vaovao amin'ny Linux sy macOS i Firefox
Amin'ny volana ho avy, Firefox for Linux sy macOS dia hampiditra teknolojia vaovao izay hahatonga ny fampiasana ny navigateur ho azo antoka kokoa.
Plasma 5.18.2 dia misy ankehitriny miaraka amin'ny fanovana izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tontolo KDE
Ny KDE dia namoaka ny Plasma 5.18.2, ny famoahana fikojakojana faharoa amin'ity andiany ity izay tonga hanohy hamolavola ny tontolon'ny sary.
LibrePCB, tonian-dahatsoratra misokatra ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery LibrePCB isika. Ity dia fampiharana loharano misokatra ho an'ny fanovana faribolana.
Tsara kokoa izany: Ubuntu 20.04 dia hampiditra fizarana vaovao "Fisehoana" izay ahafahantsika misafidy ny lohahevitra tiantsika indrindra
Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dia hampiditra fizarana vaovao amin'ny safidin'ny rafitra ahafahantsika misafidy ny lohahevitry ny rafitra.
Markdown Preview, plugin hanampiana fanohanana Markdown ao amin'i Gedit
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Markdown Preview isika. Ity dia plugin ho an'i Gedit izay hanampiana ny fanohanana Markdown ho an'ny tonian-dahatsoratra.
Linux 5.3-rc3 efa misy izao, ary amin'izao fotoana izao dia mbola ara-dalàna ny zava-drehetra
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.6-rc3 ary amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny zava-drehetra amin'ny famolavolana kernel izay tena ho zava-dehibe.
Pixelorama, pikantsary maimaimpoana ary editor sprite ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Pixelorama isika. Izy io dia editor pixel sy sprite maimaimpoana ho an'ny Ubuntu.
Plasma 5.18.2 dia hampiditra fanamboarana vaovao ao anatin'ny roa andro, ary efa manana daty voatondro ny KDE Applications 20.04
Plasma 5.18.2 dia ho avy hanohy hamaha bibikely amin'ity andiany ity ary ny Plasma 5.19 dia manohy mampandroso antsika ny vaovao izay hampidiriny.
Mini Diary, fampiharana diary tsotra sy azo antoka
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery kely ny Diary Mini isika. Diary manokana dia tsotra izay azontsika arovana amin'ny teny miafina.
Buku, mpitantana tsoratadidy matanjaka ho an'ny tsipika baiko
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery boky isika. Ity dia programa iray ahafahana mitantana ireo maripejin'ny browser avy amin'ny tsipika baiko
Canonical dia manamboatra ny pejiny ISO ho an'ny Raspberry Pi mba hanazava ny zava-drehetra
Canonical dia nanavao ny pejy ao amin'ny ISOs ho an'ny tabilao Raspberry Pi ary mora kokoa izao ny mahita ny sary mety amin'ny solaitrantsika.
Tonga ny GNOME 3.34.4 hanamboatra bibikely maro amin'ity andiany ity
GNOME 3.34.4 dia tonga nanamboatra bibikely maromaro fantatra amin'ity andiany ity. Azo sintonina izao ny kaody anao ary hamely ireo PPA lehibe atsy ho atsy.
PokerTH, apetraho amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Snap ity lalao mahafinaritra ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fomba ahafahantsika mametraka PokerTH. Amin'ity lalao ity isika dia afaka mampihatra ny poker Texas Hold'em.
Canonical dia manavao ny kernel Ubuntu ary mamoaka patch maromaro hafa hanamboarana lesoka fiarovana maro
Canonical dia namoaka patch maromaro hanamboarana lesoka fiarovana isan-karazany, anisan'izany ny fanavaozana ny kinova kernel.
Plasma 5.18.1 dia tonga nanamboatra ny sasany amin'ireo hadisoana maro tonga tamin'ity andiany ity
Ny Community Community Community dia namoaka ny Plasma 5.18.1, famoahana fikojakojana voalohany amin'ity andiany ity izay manamboatra bug maro hita nandritra ny herinandro lasa.
Firefox 73.0.1 tonga hanamboatra bibikely mifandraika amin'ny fanidiana tsy ampoizina
Firefox 73.0.1 dia tonga hamaha totalin'ny 5 bibikely, izay anisany manana maro izay nahatonga ny fanidiana sy fianjerana tsy nampoizina.
MyPaint 2.0 dia manolotra fanovana lehibe toy izany ka nanapa-kevitra ny hitsambikina avy amin'ilay rindrambaiko v1.3 izy ireo
MyPaint 2.0 dia fanavaozana lozisialy misy fiovana lehibe, noho izany dia nanapa-kevitra ny mpanova azy ireo fa hanova ny isa avy amin'ny 1.3.
Linux 5.6-rc2, RC mangina voalohany izay ho kernel Linux lehibe
Linus Torvalds dia namoaka Linux 5.6-rc2, Kandidà famotsorana vaovao an'ny kernel amin'izao fotoana izao eo am-pandrosoana izay tsy nametraka fanovana lehibe.
Standard Notes, rindrambaiko fanamarihana maimaim-poana mifantoka amin'ny tsiambaratelo
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Standard Notes isika. Izy io dia fampiharana mandray naoty mifantoka amin'ny tsiambaratelon'ny naoty.
Plasma 5.18.1 dia hamaha ny maro amin'ireo bibikely nampidirina tamin'ity famotsorana lehibe ity
Plasma 5.18.1 ho avy tsy ho ela ary hanamboatra ny bibikely maro izay hita tamin'ny famoahana taloha. Nivoatra ihany koa ireo fiasa ho avy.
Gif -jam, fomba iray hikarohana gif amin'ny giphy amin'ny alàlan'ny klioba
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery gif-barotra isika. Izy io dia klioba ahafahantsika mikaroka gif animated amin'ny giphy.
Rhythmbox 3.4.4 dia mamoaka kisary vaovao ary manolotra ireo fiasa vaovao hafa ireo
Rhythmbox 3.4.4, iray amin'ireo rindran-kira mihaino mozika malaza indrindra amin'ny Linux, dia namoaka kinova vaovao miaraka amin'ny fanavaozana ny sariny.
Flatpak 1.6.2 dia tonga indrindra hanatsarana ny zava-bita
Alex Larsson dia namoaka Flatpak 1.6.2, fanavaozana kely izay tonga hanamboatra ny famerenana ny kinova taloha.
Ubuntu 18.04.4 dia tonga miaraka amin'ny Linux 5.3 herinandro taty aoriana noho ny nandrasana
Canonical dia namoaka ny Ubuntu 18.04.4, ny fanitsiana fahefatra an'ny Bionic Beaver izay miaraka amin'ny endrika vaovao miavaka indrindra amin'ny kernel Linux 5.4.
Ommpfritt, fampiharana modely volo amin'ny endrika AppImage
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Ommpfritt isika. Ity dia fampiharana ho an'ny modeling vector azo alaina amin'ny AppImage.
Tonga i Wayland 1.18 miaraka amin'ny fanohananana an'i Meson sy ireo fanovana madinidinika
Ny protokolon'ny mpizara sary Wayland dia namoaka kinova vaovao omaly. Ity no Wayland 1.18, fandefasana izay ...
Ahoana ny fiasan'ny mpifidy emoji Plasma 5.18.0 vaovao
Amin'ity lahatsoratra fohy ity dia manazava ny fomba fiasan'ny rafi-pifidianana emoji vaovao natolotry ny KDE Plasma 5.18.0.
Ksnip 1.6.1, havaozina ho an'ity fitaovana pikantsary ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny ksnip 1.6.1 isika. Fanatsarana vitsivitsy no nanampy an'ity programa pikantsary ity.
Firefox 73 tonga manatsara ny feo, miaraka amin'ny zoom ankapobeny sy ireo vaovao hafa
Araka ny voalahatra, Mozilla dia namoaka ny Firefox 73. Ity kinova vaovao ity dia tonga miaraka amin'ny feo nohatsaraina sy ny fiasa vaovao hafa.
Plasma 5.18.0, misy izao ny fandefasana lehibe nandrasantsika
Ny Plasma 5.18.0 dia efa navotsotra tamin'ny fomba ofisialy. Izy io dia miaraka amin'ny fanovana lehibe maro amin'ny dikan-teny Plasma lehibe indrindra hatramin'izao.
MATE 1.24 dia manatevin-daharana an'io fironana tsara io ary ao anatin'izany ny maody Do Not Disturb
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tontolon'ny sary MATE 1.24. Anisan'ireo zava-baovao ao aminy ny fiovana am-polony amin'ny fampiharana azy.
Frameworks 5.67 dia misy fanovana efa ho 150 hanatsarana ny traikefa KDE
Ny KDE Frameworks 5.67 dia tonga niaraka tamin'ny fanovana 150 monja izay hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa ho an'ny rindrambaiko KDE rehetra, toy ny Plasma.
Linux 5.6-rc1, ankehitriny dia misy ny RC voalohany amin'ny kernel izay natao ho tsy hay hadinoina
Linus Torvalds dia namoaka Linux 5.6-rc1, Kandidà famotsorana voalohany an'ny kernel Linux izay hitondra fiasa vaovao manan-danja maro.
Friture, mpandinika horonantsary amin'ny fotoana tena izy azo alaina ho AppImage
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Friture Audio Analyzer isika. Ity dia mpandinika horonantsary amin'ny fotoana tena izy izay azontsika ampiasaina amin'ny Ubuntu.
GNOME 3.36 sy ny vaovaony dia azo jerena amin'ny horonan-tsary, miaraka amin'ny maody Do Not Disturb vaovao sy app Extensions
Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny vaovao marobe izay ho tonga miaraka amin'ny GNOME 3.36 izahay, izay antenaina ho famotsorana lehibe.
Ny Plasma 5.18, azo alaina ao anatin'ny roa andro, dia mahazo ny fika farany, ary ny vaovao hafa tonga ao amin'ny KDE
Plasma 5.18.0 dia ho tonga afaka roa andro. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny mikasika ny farany mikasika izay nampiany sy ny vaovao hafa izay ho avy rahatrizay.
Tsy mampiseho ny fonon'ny tranombokinao i Elisa? Ity fika kely ity dia hanamboatra azy io
Elisa no mpilalao mozika default ao amin'ny Kubuntu 20.04. Raha manana olana amin'ny fonony ianao dia eto izahay milaza aminao ny vahaolana mety.
GNOME 3.36 dia mikendry ny famotsorana iray hafa lehibe ho an'ny iray amin'ireo tontolo sary malaza indrindra
Ny Tetikasa GNOME dia miasa amin'ny fanaovana GNOME 3.36 famoahana iray hafa lehibe ho an'ny tontolon'ny sary, izay vaovao tsara ho an'i Ubuntu.
Ubuntu 20.04 Focos Fossa dia efa misy ny lohahevitra Yaru vaovao
Tamin'ny tapaky ny volana janoary dia nandroso ny drafitra fanavaozana ny lohahevitra default Ubuntu 20.04 ny Canonical. Ilay tompon'andraikitra…
Pencil2D, mamorona sary mihetsika an-tànana 2D amin'ny fomba tsotra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Pencil2D isika. Amin'ity fitaovana tsotra ity dia hahafahantsika mamorona sarimiaina 2D amin'ny tanana.
Kdenlive 19.12.2 mivoaka izao, saingy fanovana 13 fotsiny no ampidiriny, ao anatin'izany ny fanohanana ny Qt 5.14
Miaraka amin'ny KDE Applications 19.12.2, namoaka ny Kdenlive 19.12.2 ny fiaraha-monina KDE, fanavaozana kely izay tsy hidina amin'ny tantara ho feno indrindra.
Ny KDE Applications 19.12.2 dia tonga mba hanohy hamolavola ireo fampiharana navoaka tamin'ny Desambra
Ny KDE Community dia namoaka ny KDE Applications 19.12.2, ny famoahana fikojakojana faharoa amin'ity andiany ity izay tonga hanamboatra bibikely.
Lightworks 20, kinova vaovao (beta) an'ity mpamoaka horonantsary matihanina ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Lightworks 20. Ity dia kinova beta vaovao an'ity mpampanonta horonantsary matihanina mahafinaritra ity.
Fahadisoam-panantenana kely: Ubuntu 20.04 Focal Fossa dia hampiasa Linux 5.4
Linux 5.5 dia mivoaka izao ary Ubuntu 20.04 Focal Fossa dia ho ela, saingy toa tsy afaka manararaotra ny vaovao farany momba ny kernel isika.
Ny Kubuntu Daily Builds dia efa mampiasa an'i Elisa ho mpilalao default ary mampiditra kisary vaovao ho an'ny mpandefa fampiharana
Ny farany Kubuntu 20.04 Daily Build Focal Fossa dia efa mampiasa an'i Elisa ho mpilalao mozika default. Hatramin'izao dia Cantata no nampiasako.
Kubuntu Focus dia efa azo alefa mialoha, hanomboka handefa azy tsy ho ela
Tamin'ny faran'ny volana janoary dia namoaka ny Kubuntu Focus ny KDE Community sy Tuxedo, miaraka amin'ny MindShareManagement. Momba ny…
Nohavaozina indray i Sudo, amin'ity indray mitoraka ity mba hisorohana ireo mpijirika amin'ny fampiharana baiko ho faka
Tetikasa Debian sy Canonical, ankoatry ny hafa, dia namoaka vaovao momba ny fahalemena ao Sudo izay namela ilay olona diso hanao baikony.
StatusPilatus, mahazoa mora foana ny mombamomba ny rafitra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny StatusPilatus isika. Fitaovana iray ity hahazoana loharanom-baovao avy amin'ny tontolon'ny sary.
VcXsrv dia mamela antsika hampiasa fampiharana Linux miaraka amina mpampiasa interface ao amin'ny Windows 10
Ny WSL dia mamela antsika hampiasa ny terminal Linux amin'ny Windows, fa tsy ny fampandehanana fampiharana miaraka amin'ny GUI. Raha ity farany no tadiavinao dia azonao atao ny mampiasa VcXsrv.
Linux 5.6 dia ahitana fiasa vaovao hampangatsiaka ny CPU
Linux 5.6 dia ho famoahana tena manan-danja ary eo amin'ireo fiasa vaovao izay hampidiriny dia hisy iray hampangatsiaka ny CPU. Ahoana no hatao?
Ubuntu Studio 20.04 koa dia mandefa fifaninanana fametahana sary an-tsaina, saingy somary tsy mitovy ny miditra
Ubuntu Studio 20.04 dia nanokatra fifaninanana sary sokitra ho an'ny Focal Fossa. Raha te handray anjara dia tsy maintsy mampakatra ny sary any Imgur izahay.
Miaraka amin'ny Plasma 5.18 eo akaiky eo ihany, tena manomboka mifantoka amin'ny Plasma 5.19 i KDE
Ny KDE dia manomboka mifantoka amin'ny fanamboarana bibikely Plasma 5.19, saingy mampahatsiahy antsika izy ireo fa ny Plasma 5.18 dia 10 andro sisa.
Ferdi, fork an'i Franz izay teraka hanaraka filozofia tsy misy famerana
Ferdi dia iray amin'ireo forks voalohany an'ny Franz Messenger, ary misy fanatsarana vitsivitsy mahatonga ny fampiharana ho mendrika andramana.
PhotoFlare, tonian-dahatsary tsotra fa matanjaka
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery PhotoFlare isika. Mpanonta sary tsotra nefa mahery vaika izy io.
Racket, apetraho amin'ny Ubuntu ity fiteny fandefasana ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika ny fiteny fandaharana Racket sy ny fomba ahafahantsika mametraka azy amin'ny Ubuntu.
Canonical dia hanampy ny fanohanana WireGuard amin'ny Ubuntu 20.04, fa hanao azy irery
Na dia tsy hampiasa kernel manohana azy amin'ny fomba ofisialy aza izy dia hanohana an'i WireGuard ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Canonical no hikarakara izany.
Ny GIMP dia hitovy bebe kokoa amin'ny Photoshop ary, raha ny fahitantsika azy, ny fiovana dia ho tsara
Ny kinova farany fampandrosoana an'ny GIMP dia mampiseho fa ny tonian-dahatsoratry ny loharanom-baovao misokatra dia ho toy ny Photoshop tsy ho ela.
Ny Firefox 74 dia hampiditra ny fanitarana kaonteneran'ny Multi-Account napetraka ho default
Firefox 74 dia hanisy fiasa iray mitovy amin'ny fanitarana ireo kaonteneran'ny Multi-Account Containers. Sedraina amin'ny Firefox Nightly izy io izao.
Rudder Continuous Auditing & Configuration, fametrahana amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Rudder Continuous Auditing & Configuration sy ny fomba ahafahantsika mametraka azy amin'ny Ubuntu.
Fanavaozana kernel Ubuntu vaovao ho an'ny filaminana, fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia zava-dehibe loatra
Canonical dia nanavao indray ny kernel Ubuntu sy ny tsirony ofisialy rehetra, natao ho an'ny filaminana indray izy ity, saingy amin'ity indray mitoraka ity, dia vitsy kokoa ny bibikely.
Open Surge, platformer Retro 2D mahafinaritra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Open Surge isika. Ity dia lalao an-tserasera Retro mahafinaritra 2D izay hahafahantsika mamorona ambaratonga vaovao.
Toa ny Linux 5.6 no ho famotsoran-danja, raha mitandrina ity lisitry ny vaovao ity isika
Araka ny lisitry ny vaovao izay omanin'izy ireo, Linux 5.6, ny kinova farany amin'ny kernel Linux, dia ho famotsorana lehibe.
Linux 5.5 izao no misy, manampy ny fanatsarana ny fitaovana sy ny zava-baovao
Tamin'ny farany dia tsy nisy rc8 ary namoaka ny kinova farany an'ny Linux 5.5 ny Linux Torvalds, kinova iray amin'ny kernel miaraka amin'ny fanatsarana maro ny fanohanan'ny fitaovana.
Gnome Builder, tontolo iainana mikambana miaraka amin'ny tanjona ankapobeny
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Gnome Builder isika. IDE kendrena ankapobeny amin'ny famolavolana rindrambaiko amin'ny birao Gnome.
Telegram no rindrambaiko voalohany nahazo fampifanarahana tamin'ny fampandrenesana mifandraika amin'ny Plasma 5.18 sy ireo fiasa vaovao hafa
Anisan'ireo zava-baovao amin'ity herinandro ity ny Telegram tonga manitsaka ary efa mifanaraka amin'ny fampandrenesana mifandraika amin'ny Plasma 5.18.
Ity dia rindrambaiko Plasma 5.18. Ary ahoana?
Ny Plasma 5.18 dia nanambara ny sary an-tsaina hampiasainao. Ho azo zahana izany rehefa tonga amin'ny repository Backports ny kinova miorina.
Izany no ahafahanao misoroka ny vakizoro tsy hihataka amin'ny Firefox 74
Ny Firefox 74 dia misy safidy vaovao amin'ny: config izay hisorohana ny valan'ny browser tsy hiala. Manazava ny fomba ahazoana azy izahay.
Sarintany madio, apetraho amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny Flatpak ity mpijery ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Pure Maps isika. Ity dia mpijery sarintany hampiasaina ao amin'ny Ubuntu izay azontsika apetraka amin'ny fampiasana Flatpak.
Flatpak 1.6.1 tonga amin'ny famoahana fikojakojana voalohany an'ity andiany lehibe ity
Flatpak 1.6.1 dia tonga toy ny famoahana fikolokoloana voalohany amin'ny andiany iray manan-danja amin'ny fampidirana ireo endri-piarovana vaovao sy ny fanaovana trosa.
BreakTimer, tantano ny fijanonan'ny masonao mba tsy ho maratra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny BreakTimer isika. Ity programa ity dia hanampy antsika hitantana fiatoana eo alohan'ny efijery.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny divay 5.0, miaraka amina vaovao toa ireto
Taorian'ny fampandrosoana iray taona, ny ekipa ao ambadiky ny WineHQ dia namoaka ny kinova miorina amin'ny divay ...
Ny Plasma 5.18 dia misy fitaovana fitaterana rafitra iray, tsy voatery atao izany fa tokony hampihetsika azy rehetra isika
Ny KDE Plasma 5.18.0 dia hampiditra fitaovana fampandehanana rafitra vaovao mitovy amin'ilay efa misy ao amin'ny Ubuntu ary tsy maintsy atao izany.
Hanjavona ihany i Amazon amin'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa amin'ny farany
Ny fampiharana Amazon, napetraka tsy misy fampiasa ao amin'ny Ubuntu efa ho folo taona izao, dia tsy hiseho intsony ao amin'ny Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Jrnl, fampiharana tsotra handraisana naoty avy amin'ny tsipika baiko
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery jrnl isika. Ity dia fampiharana amin'ny fandraisana an-tsoratra avy amin'ny tsipika baiko.
Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dia hanisy lohahevitra maizina ihany amin'ny farany
Ny famoahana XFCE ho avy an'ny Ubuntu, Xubuntu 20.04 LTS Focal Fossa dia hanatevin-daharana ny fironana ary hampiditra lohahevitra maizina ho an'ny rafitra iray manontolo.
Linux 5.5-rc7 efa misy izao ary mety ho tonga ao anatin'ny fito andro ny kinova farany
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.5-rc7 misy fanovana vitsivitsy ary manome sosokevitra fa ny famoahana farany dia afaka mivoaka ao anatin'ny herinandro.
Plasma 5.19 dia manambara ny vaovao voalohany. Plasma 5.18.0 dia ho tonga afaka telo herinandro
Ny KDE dia nanambara tamintsika tamin'ity herinandro ity ny sasany amin'ireo vaovao voalohany manomana ny Plasma 5.19 izy ireo. Lazainay aminao ireo sy ny vaovao hafa.
Ttyrec, programa hanoratana ny asanao ao amin'ny terminal Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny ttyrec isika. Ity programa ity dia hahafahantsika mirakitra ny asanay amin'ny terminal.
XFCE 4.16 dia ho azo namboarina kokoa noho ny kinova taloha
XFCE 4.16 dia ho tonga amin'ny volana Jona ary hanampy endri-javatra manan-danja izay hahatonga azy io hahasarika maso kokoa. Midika ve izany fa tsy ho be ranoka intsony?
Ny OS fototra 6 dia hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa, saingy mbola tsy misy daty famotsorana voalahatra
Ireo mpandrindra ity fizarana mahafinaritra ity dia nandroso fa ny OS OS 6 fototra dia hiorina amin'ny Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Plasma 5.18.0 Beta misy izao. Vaovao lehibe indrindra sy ny fomba hanandramana azy
Ny KDE Community dia namoaka ny beta voalohany an'ny Plasma 5.18.0. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny momba ny vaovao miavaka sy ny fomba hanandramana azy izao.
Ny Unity 8 dia tsy mbola safidy tsara ampiasaina amin'ny Ubuntu 20.04
Na dia nandatsaka izany aza i Canonical, ny Unity 8 dia mbola eo an-dalam-pandrosoana ary mety ho safidy tsara amin'ny ho avy, fa tsy amin'ny fotoana hanombohan'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
PSeInt, mpandika teny pseudocode ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny PSeInt isika. Ity dia mpandika kaody pseudo natao ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra fandaharana.
Ubuntu 20.04 dia ho tonga miaraka amina lohahevitra nohavaozina miaraka amina loko mitovy fanamiana
Canonical dia miasa amina lohahevitra vaovao ho an'ny rafitra fiasa izay hanomboka amin'ny Ubuntu 20.04. Eto dia azonao atao ny mijery azy voalohany.
Firefox 74 dia nanamafy fa handatsaka ny fanohanana ny TLS 1.0 sy ny TLS 1.1
Firefox 74, amin'izao fotoana izao ao amin'ny fantsona Mozilla Nightly, dia voamarina fa hampijanona ny fanohanana ny TLS 1.0 sy ny TLS 1.1.
Navoaka ny KDE Frameworks 5.66, azo alaina ihany koa ao amin'ny Discover miaraka amin'ny fanovana 100 mahery
Namoaka ny Frameworks 5.66 ny Community Community KDE, fanavaozana vaovao izay misy fanovana mihoatra ny 100 hanatsarana ny rindrambaiko KDE.
Nootka, fampiharana fanamarihana mozika maimaimpoana ao amin'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery Nootka isika. Izy io dia fampiharana fanamarihana mozika maimaimpoana ho an'ny Ubuntu.
Linux 5.5-rc6 izao no misy ary Linus Torvalds dia manolotra fa hisy rc8
Linux 5.5-rc6 dia tonga taorian'ny herinandro somary nangingina, saingy i Torvalds dia efa mieritreritra ny hanemotra ny famoahana ny kinova miorina.
Veusz, programa hamokarana layout 2D sy 3D
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Veusz isika. Ity dia programa siantifika hamokarana drafitra 2D sy 3D efa vonona hamoaka.
KDE hanolotra applet Plasma vaovao ho an'ny Night Color sy ireo fiasa mandroso hafa amin'ity herinandro ity
Ny KDE dia milaza amintsika amin'ity herinandro ity momba ny fiasa vaovao toy ny applet for Night Color izay haseho ho azy ao anaty fitoeram-bokatra.
Kdenlive 19.12.1 dia miaraka amin'ny fanitsiana manan-danja maro, ary ny fanovana sasany tsy misy dikany toy ny fanovana ny taona Copyright
Ny KDE Community dia namoaka ny Kdenlive 19.12.1, famoahana fikojakojana voalohany amin'ity andiany ity izay tonga manamboatra bibikely vitsivitsy.
Ajanony ny milina fanontana: Tsy mampirisika ny hampiasa ZFS amin'ny Linux i Linus Torvalds
ZFS ho faka dia ho iray amin'ireo zava-baovao tsy manam-paharoa amin'ny Ubuntu 20.04 Focal Fossa, fa raha mijery an'i Linus Torvalds isika, dia mety tsy ho mendrika izany.
Ampahatsiahivina: Ubuntu 19.04 Disco Dingo dia hahatratra ny faran'ny tsingerin'ny fiainany amin'ny 23 Janoary
Ubuntu 19.04 Disco Dingo dia hitsahatra tsy hahazo fanohanana amin'ny 23 Janoary. Raha mampiasa an'io kinova io ianao dia diniho ny manavao izao.
Firefox 72.0.1 koa dia manamboatra ireo lesoka fiarovana ireo
Firefox 72.0.1 dia tonga tany amin'ireo tahiry ofisialy ofisialy, miaraka amina endrika vaovao sy fanamboarana fiarovana maro.
TensorFlow, tranomboky rindrambaiko ho an'ny informatika isa
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery TensorFlow isika. Izy io dia tranomboky rindrambaiko noforonina sy notanan'i Google ho an'ny informatika isa.
Firefox 72.0.1 tonga hanamboatra lesoka fiarovana mafy
24 ora taorian'ilay kinova voalohany dia namoaka ny Firefox 72.0.1 i Mozilla hamahana ny lesoka amin'ny fiarovana heverin'izy ireo ho manakiana.
Tonga ny GNOME 3.34.3 hanohy ny fanitsiana ny tontolon'ny sary Ubuntu sy distros malaza hafa
Ny GNOME Project dia namoaka ny GNOME 3.34.3, izay mifanindran-dàlana amin'ny famoahana fikojakojana fahatelo amin'ity andiany ity ary manohy mamolavola ny tontolon'ny sary malaza.
Ny KDE Applications 19.12.1 dia tonga hanamboatra ireo bibikely voalohany amin'ity andiany ity
KDE Applications 19.12.1 dia misy izao. Izy ireo dia miaraka amin'ny fanovana efa ho 300 ary ho avy tsy ho ela amin'ny rafitra fiasa miaraka amin'ny tahiry manokana.
Plasma 5.17.5 tonga amin'ny famoahana fikojakojana farany amin'ity andiany ity. Fiatoana manaraka, Plasma 5.18.0
Ny Community Community Community dia namoaka ny Plasma 5.17.5, izay mifanindran-dàlana amin'ny famoahana fikojakojana farany indrindra amin'ity andiany ity ary mametraka ny sehatra ho an'ny Plasma 5.18.0.
Ampivoary ny kernel Ubuntu anao: Ny fanarenana Canonical dia manodidina ny 30 marefo amin'ny kinova rehetra tohanan'ny
Canonical dia namoaka kinova nohavaozina an'ny kernel Ubuntu hanamboarana kilema fiarovana hatramin'ny 30. Vaovao farany faran'izay haingana.
Mono, fampiharana malalaka ny rafitra .NET
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Mono isika. Fampiharana .NET maimaimpoana io ahafahana mamorona rindrambaiko miampita sehatra.
Miarahaba antsika amin'ny taona i Dell amin'ny alàlan'ny fanontana XPS 2020 Developer 13, miaraka amin'ny Ubuntu 18.04 sy mpamaky rantsantanana
Niditra tamin'ny taona 2020 i Dell tamin'ny fampahafantarana anay solosaina vaovao, ny XPS 13 Developer Edition tamin'ny taona 2020 izay mampiasa ny rafitra Ubuntu 18.04 LTS.
Firefox 72 dia azo alaina avy amin'ny mpizara FTP an'i Mozilla. Fanombohana ofisialy ao anatin'ny 24 ora latsaka
Mozilla dia efa nampakatra ny Firefox 72 tao amin'ny mpizara FTP azy. Ny famoahana ofisialy dia ho tonga ao anatin'ny 24 ora miaraka amin'ny PiP activated amin'ny Linux.
LiteIDE, tontolon'ny fampandrosoana natao ho an'i Go
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery LiteIDE isika. Izy io dia tontolon'ny fampandrosoana natao ho an'ny tetikasa novolavolaina niaraka tamin'i Go.
Linux 5.6 dia efa manomana ireo vaovao rehetra ireo
Na dia mbola tsy nanomboka aza ny fampandrosoana dia efa manomana fanovana vitsivitsy ny Linux 5.6. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia miantso anao ny sasany amin'ireo zava-baovao.
Linux 5.5-rc5 dia misy fanovana kely maro ary fanitsiana ny famerenana amin'ny laoniny lehibe
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.5-rc5, ny Kandidà famotsorana farany izay misy fanamboarana kely maro ary fanitsiana lehibe.
QDirStat, tadiavo ary diovy ny kapila mafy ataonao avy amin'ny tontolon'ny sary
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery QDirStat isika. Izy io dia programa hanadiovana ny kapila mafy amin'ny solosaintsika.
Ny KDE dia manome antsika ny fanomezana an'ny Magy, izay ahafahantsika mamaly ireo hafatra avy amin'ilay fampandrenesana
KDE dia namoaka androany, Three Kings Eve, fanovana izay ho tonga amin'ny rindrambaiko, ho toy ny zava-baovao mahaliana ao amin'ny rafitra fampandrenesana.
IDLE Python, tontolon'ny fampandrosoana tafiditra ao anatin'ny fianarana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny IDLE Python isika. Izy io dia tontolon'ny fianarana sy fampandrosoana mivaingana ho an'i Python.
Voafafa ny fisalasalana: ny Ubuntu Studio 20.04 dia ho kinova LTS
Betsaka ny zavatra voalaza momba azy io ary efa nesorina ny fisalasalana: ny Ubuntu Studio 20.04 Focal Fossa dia ho kinova LTS ... voalohany.
Lubuntu 18.04 dia tsy afaka manatsara mivantana ny Lubuntu 20.04 Focal Fossa
Manoro hevitra antsika ny ekipan'ny Lubuntu: raha mampiasa Lubuntu 18.04 ianao dia atsangano amin'ny Eoan Ermine izao. Tsy afaka manavao mivantana ny Focal Fossa ianao.
LMMS 1.2.1, fanavaozana vaovao ho an'ny Linux MultiMedia Studio
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery LMMS 1.2.1 isika. Ity no fanavaozana farany farany an'ny Linux MultiMedia Studio.
Ubuntu dia manana mpanamory efijery fototra sy miafina napetraka amin'ny toerana misy anao. Lazainay aminao ny fomba fampiasana azy
GNOME, ny tontolon'ny sary ampiasain'ny Ubuntu, dia manana mpamoaka horonantsary napetraka aorin'izany. Ampianarinay amin'ity lahatsoratra ity izay rehetra ilainao ho fantatra.
KDE dia nanambara ny drafitra nataony tamin'ny taona 2020. Hisy endrika vaovao ho an'ny Plasma ve?
Omaly, andro farany tamin'ny 2019, Nate Graham dia nanome famerenana ny zava-bitan'ny KDE tamin'ny farany ...
Elisa, ilay mpilalao mozika default ao amin'ny Kubuntu 20.04 ... na izay ny fikasana
Ny KDE Community dia miasa mba hahatonga ny mpilalao mozika Elisa ho iray izay ampidirina ao amin'ny Kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Nandinika ny zava-bita vita nandritra ny taona 2019 ny KDE
Ny KDE Community dia namoaka lahatsoratra iray izay mampatsiahy antsika ny fandrosoana rehetra vitany tamin'ny taona 2019. Ary tsy vitsy izy ireo.
Firefox 73 dia manolotra safidy vaovao hanamboarana zoom manerantany ho an'ny pejin-tranonkala rehetra
Ny iray amin'ireo zava-baovao avy amin'ny tanan'ny Firefox 73 dia ny ahafahantsika manamboatra ny isan-jaton'ny zoom ho an'ireo pejin-tranonkala rehetra.
Linux 5.5-rc4 dia manamboatra bibikely vitsivitsy amin'izao andro krismasy izao
Linus Torvalds dia namoaka ny Linux 5.5-rc4, kinova Krismasy izay noraisin'izy ireo an-tsokosoko saingy eto izy hanamboatra bug vitsivitsy.
Tsy miala sasatra amin'ny Krismasy ny KDE ary manohy milaza amintsika ny vaovao iasany
Nate Graham avy amin'ny KDE Communiti dia mitantara amintsika izay ho avy tsy ho ela amin'ny Plasma, KDE Applications, ary Frameworks.
Ny fampandrosoana KDE Frameworks 6 dia hanomboka amin'ny fanadiovana ny kaody avy amin'ny kinova taloha
Hanomboka tsy ho ela ny dingana fampivoarana ny KDE Frameworks 6 ary ny zavatra voalohany hataon'ny KDE Community dia ny fanadiovana ny kaody avy amin'ireo kinova taloha.
Darktable 3.0, safidy tsara ho an'ny fanodinana sary RAW
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Darktable 3. Ity no kinova farany navoaka mandraka androany amin'ity programa ity hiasa amin'ny sary RAW.
Linux 5.3 dia mahatratra ny fiafaran'ny tsingerin'ny fiainany. Fotoana hanatsarana ny Linux 5.4
Linux 5.3 dia nahatratra ny fiafaran'ny tsingerin'ny fiainany, noho izany dia asaina manavao haingana ny kernel amin'ny Linux 5.4 faran'izay haingana.
Linux Mint 20 dia hanomboka ny fampandrosoana aorian'ny fanamboarana ny rafitra fiasa
Taorian'ny famoahana ny kinova tamin'ny Desambra dia nilaza momba ny Linux Mint 20 sy LMDE 4 i Clement Lefebvre.
Headset 3.1, milalao mozika Youtube avy amin'ny birao Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny Headset 3.1 isika. Ity programa ity dia hahafahantsika milalao horonantsary sy mozika YouTube avy amin'ny Desktop.
Herintaona taty aoriana dia mbola mivoatra hatrany ny VLC 4 ary tsy mandeha tsara amin'ny Linux
VLC 4 dia ho revolisiona amin'ny iray amin'ireo mpilalao haino aman-jery tsara indrindra any, saingy manararaotra ny fotoanany izy ireo ary izao dia mety hihatsara.
OpenLiteSpeed, fanontana loharano misokatra an'ny LiteSpeed ​​Web Server
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery OpenLiteSpeed ​​isika. Ity no kinova mivelatra amin'ny LiteSpeed ​​Web Server Enterprise.
Tsy Kubuntu 20.04, fa ny Plasma 5.18 dia hanana fifaninanana valiha amin'ny wallpaper ary afaka mandray anjara ianao izao
Plasma 5.18 dia nanokatra fifaninanana horonantsary izay azonao andraisana anjara ankehitriny. Hiseho amin'ny Plasma ny mpandresy manomboka amin'ny volana feb